The Irrawaddy's Blog: တရုတ်ပြည်ရောက်မြန်မာအလုပ်သမားများ ဘေးကင်းစွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
တရုတ်ပြည်ရောက်မြန်မာအလုပ်သမားများ ဘေးကင်းစွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ရောက် လာတဲ့ အတွက် ၈၈ မျိုးဆက် ( ငြိမ်း/ပွင့်) နဲ့ ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ILO တို့ ပူးပေါင်းပြီး ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၃) ရက် က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အပြည့်အစုံကို မူရင်းအတိုင်း အောက်တွင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာ အလုပ်သမားများဘေးကင်းစွာပြန်လည်ရောက်ရှိ တရုတ်နိုင်ငံ Fujian ပြည်နယ်၊ Jinjiang မြို့တော်၊Chendai မြို့ ၊ Xiban စက်မှုဇုန် ရှိ အထည်ချုပ် စက်ရုံ ၂ ရုံတွင် ဆိုးရွားသည့် လုပ်ငန်းခွင် တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရကြောင်း ၈၈မျိုးဆက် (ငြိ်မ်းချမ်းရေး နှင့် ပွင့် လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်း) မှတစ်ဆင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ရေးရာ အဖွဲ့ (အိုင်အယ်လ်အို) သို့ ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံခဲ့ ကြသည့် အလုပ်သမား (၄၂)ဦးသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၁) ရက်
နေ့ တွင် ရန်ကုန်မြို့ သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြပြီး ယခုအခါ မိသားစု နှင့် အတူနေထိုင်လျှက်ရှိပါသည်။
ယခုအဖြစ်အပျက်သည် ပထမဆုံး အကြိမ် မဟုတ်ဘဲ အဆိုပါဒေသတွင်ယခုကဲ့သို့ အခက်အခဲ များနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရခြင်းများရှိနေကြောင်း ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားမှုများ အရသိရှိရပြီး၊ ပြီးခဲ့သည့် လများကလည်း လုပ်ငန်းခွင်မှ ထွက်ပြေးမှု(၁)ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ထိုအဖွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်ရောက်အောင် (၇) ရက်ကြာခြေလျှင်ခရီးနှင်ခဲ့ကြရပြီး ၊ မိမိတို့ နေရပ်ရောက်မှ အလုပ်ပွဲစား အား ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် ဆိုင် ရာ ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၂၆ အရ အရေးယူနိုင်ရန် တိုင်ကြားခဲ့သည်။
ယခု ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် အလုပ်သမား (၄၂)ဦး ကလည်း နစ်နာကြေး နှင့် လုပ်ခရရှိရေး တို့ အတွက် ဥပဒေနှင့်အညီ အမှုဖွင့် အရေးယူနိုင်ရေးကို ကြိုပမ်းလျှက်ရှိနေကြပါသည်။
အိုင်အယ်အို စံသတ်မှတ်ချက်များအရ “ေ၇ွှ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ သည် တရားဝင်အထောက် အထား ရှိခြင်း၊ မရှိခြင်းတို့နှင့် မသက်ဆိုင်စေဘဲ မိမိလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသည့်အလုပ်အတွက် လုပ်ခ ရရှိရေး အပါအ၀င် အခြေခံအလုပ်သမားအခွင့်အရေးများ ရရှိစေရမည် ”ဟု ပြဌာန်း ဖော်ပြ ထားသည်။
အမျိုးသမီး(၈)ဦး ပါဝင်သည့် အဆိုပါ အလုပ်သမားများသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသ ကြီးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်တို့မှဖြစ်ကြပြီး နေရာထိုင်ပေးမည်၊ အစား အသောက်
ကျွေးမည်၊ တစ်လလျှင်ကျပ် နှစ်သိန်းရမည် ဟု ကတိပြုပြောဆိုသဖြင့် သဘောတူ သွားရောက်လုပ် ကိုင်ကြ ရာ လုပ်အားခ အပြည့်မရခြင်း၊ အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြခြင်းမရှိဘဲ လစာငွေမှ ဖြစ်တောက်ခံရခြင်း များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသဖြင့် တိုင်ကြားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
လစာငွေ ပေးရန်တောင်းဆိုသည့်အခါ ရိုက်နှက်ခံရပြီး၊ အလုပ်သမားတစ်ဦးမှာ ကျန်းမာရေး စရိတ်မြင့် မားမှု ကြောင့် ဆေးကုသမှု မရရှိသဖြင့် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း တိုင်တန်းမှုတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
အခြေအနေဆိုးရွားသည့်ဒဏ်မခံနိုင်သဖြင့်အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ခွင့်တောင်းဆိုရာအလုပ်ရှင်မှ အိမ်ပြန် စရိတ်မပေးနိုင်ကြောင်းပြန်ပြောခဲ့သည်။
အလုပ်သမားများမှာတရုတ်စကားပြောဆိုတတ်ခြင်းမရှိ သည့်အပြင် တရားဝင်မဟုတ်သောကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရမည်ကို ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြင့်ဆက်လက် နေထိုင်ခဲ့ကြရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိသားစုများအားဆက်သွယ်၍အခြေအနေ ကိုပြောပြခဲ့ကြရာ၊ မိသားစုဝင်များက ၈၈မျိုးဆက် သို့ အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပြီး၊ ၄င်းမှတစ်ဆင့် အိုင်အယ်လ်အို နှင့် လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးအထူး တပ်ဖွဲ့ သို့ အဆင့်ဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင့်းဖြင့် အလုပ်သမားများ နှင့်အဆက်အသွယ်ရရှိခဲ့သည်။
လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ ၏ အကြံပေးချက်အတိုင်း အလုပ်သမားများသည် အလုပ်ပွဲ စား၊ အလုပ်ရှင်တို့ နှင့် စကားပြောဆို ညှိနှိုင်းခဲ့ရာ ၄င်းတို့အား နယ်စပ်အထိ အရောက်ပြန်ပို့ပေးရေး အတွက်အောင်မြင်အောင် ပြောဆို ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် မြန်မာအလုပ်သမား အများအပြား အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိရာ ၊ ၈၈မျိုးဆက် နှင့် အိုင်အယ်လ်အို တို့က အဆိုပါအလုပ်သမားများ၏ရပိုင်ခွင့်များအားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များ နှင့် ယန္တရားများ ရရှိ လည်ပတ်ရေး နှင့် တရားဝင် အလုပ်လုပ် ကိုင် နိုင်ရေး လမ်ကြောင်းများ အတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးရန် နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရတို့အားတိုက်တွန်းသွား မည် ဖြစ်သည်။
ထပ်မံသိရှိလိုပါ က -
သက်သက်အောင် (၈၈မျိုးဆက်) - - ဖုန်း - 09-73046768
နှင်းနှင်းနွယ် (အိုင်အယ်အို) - ဖုန်း - 01-566538 , 566539 - တို့နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Press Release. 23rd July 2014
Myanmar Migrant Workers Return Home Safely from China ON the 11th July 2014, 42 Myanmar workers safely reached Yangon to be reunited with their families after they reported facing atrocious working conditions in two garment factories inXiban Industrial Zone, Chendai Town, Jinjiang City, Fujian Province, China to the 88 Generation (Peace and Open Society) and the International Labour Organisation (ILO).
This is not the first time Myanmar workers have reported the harsh conditions of the factories in this area. Several months ago another group escaped and journeyed for7days to the Myanmar border.
Once home they openedacase against the Myanmar broker under Article 26 of the Law Relating to Overseas Employment.
The 42 workers who have just returned are also considering the possible legal channels they can pursue to seek compensation and wage payment.
ILO standards state that migrant workers, regardless of their legal status, have fundamental labour rights, including remuneration for work performed.
The workers, including 8 women,were recruited in Myanmar from Ayerwaddy, Bago regions and Hlaingtharya Township of Yangon.
They had been promised payment of 200,000 kyat per month (around 200US$) and told that they would be provided with food and lodging.
However, they reported that the garment factory in China did not pay them their due wages and gave no explanation for deductions from their salaries.
They reported being beaten when they asked for their salaries and told of one migrant who died because they were charged so much for health care that he did not visit the clinic.
When the workers could no longer tolerate these conditions they requested permission to leave but were told that they would not be given any assistance to return home.
The workers do not speak Chinese and were afraid of being arrested because they were illegal. In desperation, they contacted their families for help. The families in turn contacted 88 Generation who consulted with the ILO and facilitated the Anti- Trafficking Police Force to speak directly to the workers.
Following their advice, the workers were able to persuade the Myanmar broker and Chinese employer to arrange for their transport back to the border.
Given the large numbers of Myanmar workers in China, the ILO and 88 Generation urge the governments of both countries to develop agreements and mechanisms to protect the rights of these workers and to discuss possible legal channels through which the workers can be recruited and employed.
In the meantime, the ILO and 88 Generation are committed to working with the Ministry of Labour, Employment and Social Security and the Anti-trafficking Police Units to provide assistance to migrants whose rights have been abused.
please contact: Thet Thet Aung, 88 Generation Ph:+959-73046768
Hnin Hnin Nwe , ILO: +951-566538 , 566539